Taariikhda kulamadii madaxweyneyaasha Ruushka iyo Mareykanka - Barwaaqo TV - Warbaahinta Bulshada Horumarkeeda
Taariikhda kulamadii madaxweyneyaasha Ruushka iyo Mareykanka
By admin June 17, 2021 45
Shalay waxaa magaalada Genève ee dalka Switzerland ku kulmay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo dhiggiisa Ruushka Vladimir Putin,Madaxweynaha dalka Switzerland Guy Parmelin ayaa kusoo dhaweeyay labada madaxweyne qasriga taariikhiga ah ee “ La Grange”Labada madaxweyne ayaa ka wada hadlay mowduucyo kala duwan oo ay ugu muhiimsanaayeen arrimaha istaraatiijiyada caalamka, cudurka Corona,la dagaalanka dambiyada internetka, iskaashiga dhaqaalaha iyo arrimaha cimilada.
Biden iyo Putin ayaa sidoo kale isla soo qaaday xaaladaha dalalka Suuriya, Liibiya, Afghanistan,Ukraine iyo Belarus.
Billawgii xiriirka Tooska
Laga soo billaabo 1991-kii ilaa iyo hadda waxaa kulamo taariikhi ah yeeshay seddex madaxweyne oo Ruush ah iyo lix madaxweyne oo Mareykan ah.
Inta badan kulamadan dhax maray madaxda labada dal ayaa waxay ka dhaceen dal seddexaad.
Boris Yeltsin iyo George Bush (hore)
Kulankii ugu horreeyay ee dhexmaray madaxweynayaasha Ruushka iyo Mareykanka wuxuu ka dhacay Washington 1992, kadib markii madaxweynihii Ruushku ku tegay Mareykanka booqasho rasmi ah.
Labada madaxweye ayaa xilligaas kawada hadlay hoos u dhigista loolanka hubka culus ee nuclerka, inkasta oo aan la gaarin heshiis rasmi ah,Sidoo kale waxaa la isla gartay in la abuuro jawi ku dhisan is aaminaad lana joojiyo dagaalkii qaboobaa.
Boris Yeltsin iyo Bill Clinton
Boris Yeltsin iyo Bill Clinton ayaa ku kulmay magaalada Vancouver ee dalka Canada bishii April 1993,Kulankaas ayaa intiisa badan xoogga lagu saaray arrimaha dhaqaalaha.
Vladimir Putin – Bill Clinton
Madaxweyne Bill Clinton oo ku tegay booqasho shaqo dalka Ruushka ayaa la kulmay Vladimir Putin 2000,Bill Clinton waxaa muddo xileedkiisa uga haray xilligaas 6 bilood halka Putin uu ahaa madaxweyne bil oo kaliya.
Vladimir Putin iyo George Bush (danbe)
Waxay magaalada Ljubljana ee Slovenia marti gelisay 2001, kulan dhex maray Vladimir Putin iyo George Bush,Kulankaas kadib wuxuu Mareykanku ku eedey Ruushka basaasnimo, waxayna labada dal isweydaarsadeen burinta diblomaasiyiin.
Dmitry Medvedev iyo George Bush
Madaxweyne Dmitry Medvedev ayaa kula kulmay madaxweyne George W. Bush magaalaada Toyako 2008,Kulankaas ayaa kusoo beegmay Dmitry Medvedev oo xilka ku cusub iyo George W. Bush oo waqtigu kasii dhamaanayo.
Dmitry Medvedev iyo Barack Obama
Dmitry Medvedev ayaa sidoo kale la kulmay madaxweyne Barack Obama.
Kulankaas ayaa ka dhacay guriga safiirka Mareykanka uu ka degan yahay magaalada London bishii April 2, 2009,Kulankaas ayaa dhacay 73 maalin kadib markii la caleema saaray madaxweyne Obama.
Vladimir Putin iyo Barack Obama
Vladimir Putin ayaa kula kulmay Barack Obama magaalada Los Cabos, ee dalka Mexico 2012,Kulankaas ayaa dhacay 42 maalin ka dib, markii Putin uu mar kale qabtay madaxtinimada dalka Ruushka.
Vladimir Putin iyo Donald Trump
Madaxweynayaasha Ruushka iyo Mareykanka, ee kala ahaa Vladimir Putin iyo Donald Trump, ayaa ku kulmay Hamburg sannadkii 2017.
Wadahadalka labada madaxweyne ayaa socday laba saacadood iyo 15 daqiiqo, iyadoo qorshuhu ahaa 30 ilaa 45 daqiiqo.
Labada madaxweyne ayaa ka wada hadlay arrimihii ka socday dalalka Siiriya, Ukraine, hubka nucelerka iyo la dagaalanka argagxisida.
Kulanka madaxda labadaan dal ayaa ka duwan kulmada ay yeeshaan madaxada kale ee caalamka, waxaana isha ku haya warbaahinta iyo khubarada siyaasadda ee dunida.
Taariikhda kulamadii ugu muhiimsanaa ee madaxda dalalka Ruushka iyo Mareykanka
Madaxweyne ku xigeenka Galmudug oo daah furay bandhigga miisaaniyadda maamulka ee 2021-da